John Kerry Oo Toddobaadkan Booqasho Ku Iman Doona Magaalada Nairobi | Hubaal Media	Home
HUBAALMEDIA.COM John Kerry Oo Toddobaadkan Booqasho Ku Iman Doona Magaalada Nairobi
August 19, 2016 - Written by Mustafe Faro
Hargeysa:(Hubaal)-Xoghayaha arrimaha dibada dowlada Maraykanka John Kerry ayaa toddobaadka soo socda booqasho ku imanaya dalka Kenya si uu ugala hadlo siyaasiyiinta dalka Soomaaliya doorashada dhacaysa dhowaan.
Afhayeenka Wasaarada Arrimaha Dibada Maraykanka John Kirby ayaa sheegay in John Kerry xoghayaha arrimaha dibada Maraykanka uu sidoo kale booqan doono dalalka Nigeria iyo Sacudi Carabiya.
John Kerry ayaa laga yaabaa in uu kula kulmo qaar ka mid ah madaxda dalka Soomaaliya magaalada Nairobi ayna ka wadahadlaan qaabka doorashada dalka iyo sidii looga dhabayn lahaa qorshaha doorashada dadban ee dhowaan lagu heshiiyay.
Dowlada Maraykanka ayaa soo dhoweysay doorashada ka dhacaysa dalka Soomaaliya iyo sida loo qorshaheedaba, waxaana dhowaan magaalada Muqdisho soo gaadhay danjirihii ugu horeeyay ee Maraykan ah tan iyo burburkii dowladii hore ee Soomaaliya kaasoo warqadihiisa aqoonsiga u gudbiyay madaxda Soomaaliya.
Dowlada Maraykanka ayaa ka caawisa dowlada Soomaaliya dagaalada ay kula jirto Alshabaab waxaana dalka Soomaaliya jooga ciidamo Maraykan ah kuwaasoo lagu tilmaamo inay yihiin la taliyayaal.